လေ့လာမှုအရအလုပ်လုပ်သောမှတ်ဥာဏ်သည် Prefrontal Cortex နှင့် Dopamine - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်ဖြစ်သည်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 18, 2012
လူ့စိတ်ကို၏ထူးခြားသော features တွေတစ်ခုမှာ၎င်း၏စွမ်းရည်အခြေအနေများပြောင်းလဲသွားအဖြစ်က၎င်း၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များနှင့်ဦးစားပေးပြန်လည်ဦးစားပေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်သစ်များပေါ်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ဘိုင်ပြတ်-Down ကားတစ်စီးပြုပြင်ဖို့ငွေလိုနေသောကြောင့်, သို့မဟုတ်သင့်ဆဲလ်ဖုန်းသင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာအူကြောင့်သင်သည်သင်၏နံနက်ပြေးရတာကြားဖြတ်အခါသင်တစ်ဦးစီစဉ်ထားခရုဇ်ကိုပယ်ဖျက်သည့်အခါဤအဖြစ်ပျက်။
တစ်ဦးအတွက် လေ့လာမှုအသစ် ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု (PNAS), Princeton University မှသုတေသီတွေကသူတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဦးစားပေးပြုပြင်မွမ်းမံအသစ်သတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်သောယန္တယားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီဟုဆိုသည်။
Princeton ရဲ့အာရုံကြောသိပ္ပံအင်စတီကျုမှာသုတေသီအဖွဲ့ (PNI) ဘာသာရပ်များ scan ဘယ်မှာနှင့်မည်သို့လူ့ဦးနှောက်ကိုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် reprioritizes ထွက်ရှာတွေ့မှအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Unsurprisingly သူတို့ရည်မှန်းချက်များ၏ SHIFT, ပု prefrontal cortex အတွက်မြင့်မားတဲ့အဆင့်အပြုအမူတွေအမျိုးမျိုးနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့လူသိများသောဦးနှောက်၏တစ်ဒေသရာအရပ်ကိုကြာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ပြင် "အပျြောအပါးဓာတု" အဖြစ်လူသိများ - - ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပေါ်လာတဲ့သူတို့ကလည်းအစွမ်းထက် neurotransmitter dopamine ကြောင်းလေ့လာသည်။
သူတို့ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်သူတို့ဂိမ်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်တစ်ခုကိုပြောင်းရန်နိုင်ခြင်းခဲ့ကြသည်တွေ့ရှိခဲ့သည်နေစဉ်အန္တရာယ်ကင်းသံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းကိုသုံးပြီး, သိပ္ပံပညာရှင်သင်တန်းသားများ၏ prefrontal cortex အတွက်လှုပ်ရှားမှုပြတ်တောက်။
"ကျနော်တို့ကတဦးတည်းတာဝန်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပြီးတော့ပြင်သာပြောင်းသာအခြားအလုပ်တစ်ခုကိုပြောင်းရန်ဖို့ဦးနှောက်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုကိုအထောက်အကူပြုရန်တစ်အခြေခံယန္တရားတွေ့ပြီ" ရှင်းပြခဲ့ ယောနသန်က Cohen ကို, PNI နှင့်တက္ကသိုလ်ရဲ့ရောဘတ် Bendheim နှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်လင်း Bendheim Thoman ပါမောက္ခ၏တွဲဖက်ဒါရိုက်တာ။
"ဒီစနစ်ချို့ယွင်းထိုကဲ့သို့သော schizophrenia နှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသောသူတို့သည်အဖြစ်သိမြင် function ကိုများစွာသောအရေးပါမမှန်ဗဟိုဖြစ်ကြသည်။ "
ယခင်သုတေသနပြီးသား, ဦးနှောက်က၎င်း၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့မဟုတ်အပြုအမူကိုပြုပြင်မွမ်းမံအသစ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည့်အခါ, ဒီသတင်းအချက်အလက်ကိုယာယီဦးနှောက်ရဲ့အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်သို့ချက်ခြင်းတင်သွင်းကြောင်းရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်သိုလှောင်မှုအမျိုးအစားသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ယခုတိုငျအောငျ, သို့သော်, သိပ္ပံပညာရှင်များဤအချက်အလက်မွမ်းမံဘယ်လိုထိန်းချုပ်သည့်ယန္တရားများနားလည်သဘောပေါက်ကြပြီမဟုတ်။
အတူတကွလေ့လာမှုရဲ့ဦးဆောင်ရေးသားသူနှင့်အတူ Kimberlee က D'Ardenne ဗာဂျီးနီးယားနည်းပညာအဖြစ်သူချင်းသုတေသီများ Neir Eshel, ယောသပ်လောနိတျမွို့, Agatha Lenartowicz နှင့် Leight Nystrom ၏, Cohen ကိုနဲ့သူ့အဖွဲ့သူတို့တစ်တွေဂိမ်းကစားနေစဉ်အတွင်းသူတို့ဘာသာရပ်များ၏ဦးနှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုကြံစည်။ အဆိုပါဂိမ်းကွဲပြားခြားနားသောအမြင်တွေကိုပေါ် မူတည်. တိကျတဲ့ခလုတ်နှိပ်မှသင်တန်းသားများကိုလိုအပ်သည်။ သူတို့ကစာတစ်စောင် X ကိုရှေ့တော်၌ထိုမှာစာကိုတစ်ဦးကပြသကြသည်မှန်လျှင်, သူတို့က "1" အမည်တပ်ထားသောတစ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ သူတို့က X ကိုရှေ့တော်၌ထိုမှာစာကို B ကိုမွငျလြှငျလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ပြီးတော့သူတို့က "2" အမည်တပ်ထားသောခလုတ်တစ်ခုနှိပ်နေခဲ့ရတယ်။
တာဝန်တစ်ခုအစောပိုင်းကဗားရှင်း, သို့သော်, သင်တန်းသားများကိုပထမဦးဆုံးသူတို့က X မသက်ဆိုင်အက္ခရာများကရှေ့ပြေးသောမြင်သောအခါထို 1 button ကိုနှိပ်ခိုင်းတယ်။ အရှင်ဒုတိယအကျော့မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်သော A နှင့် B စည်းမျဉ်းပါဝင်သူသတင်းစာမှရသောခလုတ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကို update နိုင်ရန်အတွက်သုံးစွဲဖို့ခဲ့သော '' သစ်ကိုသတင်းအချက်အလက် '' အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများကိုပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းပိုမိုရှုပ်ထွေးတာဝန်ပြီးစီးသောအခါနောက်မှ fMRI ဆန်းစစ်ပါ, သုတေသီ, လက်ျာ prefrontal cortex အတွက်တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုတွေ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မချ ယင်းအမြင်အာရုံတွေကို A နှင့် B တွင်ဒီအပေါ်အခြေခံပြီးနှစ်ဦးကိုခလုတ်များအကြားလုပ်ငန်းတာဝန်များ၏ရိုးရှင်းတဲ့ဗားရှင်းအဘို့, သို့သော်အမှုကိစ္စမဟုတ်ခဲ့ပေ။
Cohen ကိုရဲ့ရလဒ်တွေကိုဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု၏အချိန်ကိုက်တိုင်းတာရန်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုထားတဲ့ 2010 ကနေသူ့ကိုယ်ပိုင်ယခင်သုတေသနစီမံချက်၏တွေ့ရှိချက် corroborate ။
လက်ရှိလေ့လာမှုမှာသုတေသနအဖွဲ့လည်းဤအချက်ကိုတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်ကို update တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဦးနှောက်ဒေသကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် prefrontal cortex ဖို့တိုတောင်းသောသံလိုက်ပဲမျိုးစုံကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ သူတို့လက်ျာ prefrontal cortex မှတ်ဉာဏ်ကို update ရပါမည်ယုံကြည်သောအခါယခင်လေ့လာမှုအပေါ်သွေးခုန်နှုန်း၏အချိန်ကိုက်အခွခေံ, သိပ္ပံပညာရှင်တိအခိုက်မှာသံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ သူတို့ကသူတို့ကသင်တန်းသားများကိုစာလုံးတစ်ဦးသို့မဟုတ် B ကိုမွငျလြှငျအတိအကျ 0.15 စက္ကန့်ပြီးနောက်သွေးခုန်နှုန်းကိုအပ်လျှင်, သူတို့သည်မှန်ကန်သောခလုတ်ကိုထိနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကအရှင်မှတ်ဉာဏ်-မွမ်းမံဖြစ်စဉ်ကိုနှောင့်အယှက်ပေးဖို့သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းကိုအသုံးပြုရန်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
"ကျနော်တို့ကသွေးခုန်နှုန်း fMRI သုံးပြီးလေ့လာတွေ့ရှိညာဘက် prefrontal cortex ၏အစိတ်အပိုင်းမှကယ်နှုတ်ခဲ့ပါတယ်လျှင်ဟောကိန်းထုတ်နှင့် EEG အားဖြင့်ထင်ရှားသကဲ့သို့ဦးနှောက်က၎င်း၏သတင်းအချက်အလက်ကို update သောအခါထိုအချိန်က, ထို့နောက်ဘာသာရပ် A နှင့် B နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်မှာမဟုတ်ဘူး ခလုတ်ကို-တွန်းအားပေးတာဝန်အပေါ်သူသို့မဟုတ်သူမ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်, "Cohen ကိုရှင်းပြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှတ်ဥာဏ်တံခါးစောင့် AS DOPAMINE
အဆိုပါစမ်းသပ်မှု၏နောက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာတော့ Cohen ကိုရဲ့အဖွဲ့ neurotransmitter dopamine က prefrontal cortex ဝင်သောအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင် memory နဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို update အသစ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အရေးကြီးသောတက်ဂ်လုပ်ခြင်းများအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်း၎င်းတို့၏သီအိုရီကိုစမ်းသပ်ချင်တယ်။ Dopamine လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆုလာဘ်ပါဝင်သောသူမြားကဲ့သို့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်စဉ်များတစ်အရေအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍကစားရန်လူသိများသောသဘာဝဓာတုဖြစ်ပါတယ်။
dopaminergic အရေးပါအဖြစ်လူသိများ - - ဦးနှောက်ရဲ့ dopamine အချက်ပြမှုများ၏အများဆုံးထုတ်လုပ်ရာများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ကြောင်းဒီလိုလုပ်ဖို့အသင်းကိုထပ်ထူထပ်အထူးပြုအာရုံကြောဆဲလ်တွေနဲ့လူနေထူထပ်သော midbrain လို့ခေါ်တဲ့ဒေသ scan ဖို့ fMRI ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုတာဝန်များကိုဖျော်ဖြေနှင့်ဤဒေသများရှိနှင့်လက်ျာ prefrontal cortex အတွက်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်တွေ့ရှိရစဉ်သုတေသီများသည်ဤ dopamine-emitting အာရုံကြောဆဲလ်၏လှုပ်ရှားမှုကိုခြေရာခံ။
"ဒီထူးခြားတဲ့အစိတ်အပိုင်း dopamine အချက်ပြမှုများကျွန်တော်တို့ရဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် prefrontal cortex မှာသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု၏အပြုအမူနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင့်ပဲ" ဟု Cohen ကိုရှင်းပြတယ်။
"တွေ့ရှိချက်ဒီကြယ်စုတို့သည် dopaminergic အရေးပါမဟုတျကွောငျးသတငျးအခကျြအမူအကျင့်ကို update များအတွက်သက်ဆိုင်ရာကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အပေါ်ကိုင်ဖို့ prefrontal cortex ဖွင့်, ဒါပေမယ့်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားပေးစွမ်းသည်။ "
ဘရောင်းတက္ကသိုလ်ကပါမောက္ခ David Badre, သိမြင်ဘာသာစကားနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံအတွက်အထူးကု, Cohen ကိုရဲ့အဖွဲ့၏လုပျငနျးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်က၎င်း၏အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ကို update ကိုမည်သို့နားလည်ရန်သိပ္ပံပညာရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအတွက်ရှေ့ဆက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းကိုကိုယ်စားပြုယုံကြည်သည်။